Ny singa kiraly-APICMO CDMO mpanamboatra
Products > Ny singa kiraly
Ny chirality dia fananana ara-jeômetika misy molekiola sy liona. Ny molecule chiral / ion dia tsy azo ovaina loatra amin'ny sary miresaka azy. Ny fanatrehana foibem-pahefana karbaona iray dia iray amin'ireo singan-javatra maromaro mifandraika amin'ny tontolon'ny biolojika sy ny organika tsy organika.
Ny endri-pandaminana manokana matetika dia voatondro ho toy ny havia na havia. Ny fiheveran-tena dia zava-dehibe eo amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny stereochemistry ao amin'ny simia organika sy tsy manana fikambanana. Ny hevitra dia tena manan-danja tokoa satria ny ankamaroan'ny biomolecules sy ny pharmaceutique dia chiral.
Maro ny molekiolan'ny biôlôjika dia chiral, anisan'izany ny asidra amino voajanahary (ny tranoben'ny proteinina) sy ny sifara. Ao amin'ny rafi-pahaizana biolojika, ny ankamaroan'ireo fitambarana ireo dia avy amin'ny singa iray ihany: ny ankamaroan'ny amino asidra dia ny levorotatory (l) ary ny sugara dia dextrorotatory (d). Ny proteina mitovitovy amin-javatra voajanahary dia natao avy amin'ny l-amino asidra ary fantatra amin'ny proteinina havia; Ny voankazo d-amino miavaka kokoa dia mamokatra proteinina havanana.
Mampiseho ny rehetra 4 vokatra